Hello Nepal News » रोनाल्डो र मेस्सीलाई एमबाप्पेको काउन्टर– ‘म आफूलाई रोनाल्डो र मेस्सीभन्दा उत्कृष्ट मान्छु’
रोनाल्डो र मेस्सीलाई एमबाप्पेको काउन्टर– ‘म आफूलाई रोनाल्डो र मेस्सीभन्दा उत्कृष्ट मान्छु’
फ्रान्सका विश्वकप विजेता युवा फरवार्ड केलियन एमबाप्पे वर्तमन समयका सबैभन्दा तगडा खेलाडी हुन्, यसमा दुईमत छैन । त्यत्ति मात्रै हैन, उनी यो समयका सर्वाधिक मार्केट भ्यालु भएका पहिलो नम्बरका खेलाडी पनि हुन् । उनले २२ वर्षमै विश्वकप जितिसकेका छन् भने १५० आसपास गोल गरिसकेका छन् । च्याम्पियन्स लिगमै उनले २५ गोल पूरा गरिसकेका छन् । यी सबै तथ्यांकले उनलाई उत्कृष्ट युवा खेलाडीको रूपमा सजिलै मार्क गराउँछ । तर, के यत्तिकै आधारमा एमबाप्पेलाई इटालियन युभेन्टसका क्रिस्टियानो रोनाल्डो र स्पेनिस बार्सिलोनाका लिओनल मेस्सीभन्दा उत्कृष्ट मान्न सकिन्छ ?
यो कसैले मान्ने वा नमान्ने कुरा भएन । किनभने, एमबाप्पे आफैंले यस्तो दाबी गरेका छन् । हाल फ्रेन्च क्लब पिएसजीबाट खेलिरहेका उनले आफ्नो घमण्ड र अहंकारीपनकै कारण आफू एक सफल खेलाडीको रूपमा स्थापित भएको एमबाप्पेले बताएका छन् । ‘आरएमसी स्पोर्ट्स’सँगको ताजा अन्तर्वार्तामा एमबाप्पेले हरेकका लागि घमण्ड आवश्यक रहने र यसले सफलताको सिँढी चढ्न मदत गर्ने धारणा राखेका छन् । हल्यान्डले आफूमा पनि त्यस्तो सोच रहेको बताएका छन् ।
‘अहंकार ? पक्कै पनि महत्त्वपूर्ण छ । किनभने, जब तपाईं कुनै ठाउँमा हुनुहुन्छ, अरू कसले पनि तपाईंलाई धक्का दिँदैन । तपाईंले आफूलाई विश्वस्त बनाउनुपर्छ कि, तपाईं पहाड खसाल्न पनि सक्षम हुनुहुन्छ,’ एमबाप्पेले भनेका छन्, ‘यसलाई घमण्ड वा अहंकार भने हुन्छ वा आत्मविश्वास भने पनि हुन्छ । अरूले यसलाई घमण्ड नै भन्नेछन् । तर, म चाहिँ यसलाई आफ्नो आत्मविश्वास भन्छु । त्यसैले त मलाई यस्तो घमण्ड वा आत्मविशवास मन पर्छ ।’
१९ वर्षकै उमेरमा फ्रान्सबाट विश्वकप जित्दै विश्वकपकै सर्वश्रेष्ठ युवा खेलाडी बनेका एमबाप्पेलाई आज अर्जेन्टिनाका मेस्सी र पोर्चुगलका रोनाल्डोसँग तुलना गर्ने गरिन्छ । रोनाल्डो र मेस्सीको युगपछि एमबाप्पेलाई नै सबैभन्दा सफल र उत्कृष्ट खेलाडीका रूपमा धेरैले हेरेका छन् । सोही प्रसंगमा कुरा गर्दै एमबाप्पे स्वयंले भने आफू खेल्नका लागि मैदान प्रवेश गरेपछि आफू रोनाल्डो र मेस्सीभन्दा बेस्ट छु भन्ने आत्मविश्वास आफूमा आउने र त्यसका साथमा नै आफूले ९० मिनेट खेल्ने बताएका छन् ।
‘हरेकपटक मैदान प्रवेश गर्दा म आफूलाई सर्वोत्कृष्ट मान्छु । मैले मेस्सी र रोनाल्डोविरुद्ध एकै मैदानमा खेलेको छु । उनीहरू मभन्दा राम्रा खेलाडी हुन् । धेरै कुरा जितेका छन् र धेरै गोल गरेका छन् । तर, मेरा लागि म नै उत्कृष्ट हो । म आफूलाई मेस्सी र रोनाल्डोभन्दा पनि उत्कृष्ट मान्छु । जब तपाईं आफूलाई सामिप्यता दिनुहुन्न, तपाईं उत्कृष्ट बन्न सक्नुहुन्न । हरेकलाई सफल हुन र सर्वश्रेष्ठ बन्नका लागि आत्मविश्वास चाहिन्छ । मसँग त्यो चिज छ ।’
प्रकाशित मिति २१ चैत्र २०७७, शनिबार १४:३०